Qoyska ama qaraabada ayaa laga helay dhimirka | Suomen Mielenterveysseura
Qofka qoyska ama qaraabada ah oo laga helo cudurka dhimirka dhib culus ayey ku noqoneysaa qaraabada kale iyo saaxiibada. Waxay noqon kartaa mid filan waa ah, waqti ayey qaadan kartaa in la helo daryeel munaasib ah, sidoo kale waxay u baahantahay dadaal badan in ay la yimaadaan qofka xanuunsan iyo qaraabada.Waxaa muhiim ah in qofku xusuusto inuu iska taxadaro. Haddii adiggu aad daasho qof kale ma kaalmeyn kartid.
Qaraabada qofka dhimirka qaba, waxaa loo abaabulaa caawimooyin kala duwan. Arrimahaana waa kuwo loogu talogalay in ay dadku ku kala faa’iideystaan khibradooda. Sidoo kale qofka adkaysigiisa iyo dulqaadkiisa waxaa qeyb fiican ka qaadan kara inuu helo akhbaar badan oo la xiriirta xanuunka iyo inuu awoodi karo inuu kala hadli karo arrinka tusaale qoyska iyo qaraabada kale ee qofka baxnaanada dhimirku u socoto.
Finland waxaa ku nool boqolaal kun oo qaraabada qofka dhimirka qaba ah
Dhimirka ugu badan wadanka Finland waa niyadjabka. Dadka qaba niyadjabka qaraabadoodu waxay u dhaxeynayaa in qofkii jiranaa ay kaalmeeyaan sidoo kale inay sii wataan noloshoodii caadiga ahayd, iyadoo qofka xanuunsan lagu dhiirigaliayo inuu nasto.
Qofka qaba niyadjab ama welwelka dadka kale wuu iska uruuriyaa marka la yiraa dadka soo dhexgalna wuxuu dareemayaa culeys badan. Qofku markuu qabo niyadjab ma jecla inuu in badan dad uusan aqoonin la joogo. Taas waxay sababeysaa in dadka ku dhow-dhow qofka sida qaraabada in muhiimad badan ay usii yeeshaan. Kaalmada iyo dhageysiga dadka qaraabada ah aad ayey muhiim ugu yihiin qofka qaba niyadjabka.
Qofka niyadjabka qaba qaraabadoodu qiyaas ahaan way sareysaa khatarta ah in cudurku uu ku dhaco. Sidaas awgeed waa muhiim in qofka qaraabada ah uu ogaado awoodiisa iyo waxa uu tari karo sidoo kale waa inuu xadkiisa ogaado maraka qaarna uu ka fogaado. Haddii qofka qaraabada ah uu dhib la kulmo arkana inuusan u gagsan karin dhibka, waxaa muhiim ah inuu nasasho ku filan qaato haddii loo baahdana uu raadsado caawimo kale.
Qofka qaraabadda ah wuxuu caawimo ka heli karaa caawimadda ay bixiyaan kulamadda kala duwan ee kooxaha ka kooban dadka xaaladdaas oo kale soo maray, khibradahooda kala dhageysta sidoo kale kaga hadlaan sida qofku u sii wadan karo noloshiisa, meelaha laga heli karo caawimadda latalinta caafimaadka dhimirka. Caawimadda loogu talogalay dadka qoyska ama qaraabadda ka tirsan waxaad tafaasiishooda ka heli kartaa shaashaddaha dhinaca midig ka muuqda.
Ururo kaalmeeya qoyska ama qaraabada
Mielenterveyden keskusliitto (shaashadooda waxaa kale oo laga heli karaa ururo iyo meelo kale oo kaalmeeya qoysaska ama qaraabada)